शास्त्रमा पनि लैंगिक भेदभाव - विचार/विश्‍लेषण - कान्तिपुर समाचार
धर्म, परम्परा, समाज, राष्ट्र, परिवारबाट महिला अझ पनि प्रताडित छन् । हाम्रा धर्मशास्त्रहरू महिलाको मनोवैज्ञानिक, शारीरिक शोषण गर्ने आधार हुन् । यसै धर्मशास्त्रको आधार बनाएर महिलाले गायत्री मन्त्र नजप्नु, शालिग्राम भगवान्लाई नछुनु भन्ने पनि उल्लेख थियो । तर आज गायत्री मन्त्र खुलेआम सबैले जप्छन् । के यसो गर्दा सूर्य, चन्द्र उदाएका छैनन् र ? हामी जे कर्म गर्छाैं, त्यो श्रद्धाका साथ गर्नु नै ठूलो धर्म हुनेछ । छोरा जेजस्तो होस्, जिउँदो हुँदा आमाबुबालाई लगेर वृद्धाश्रममा किन नराखोस्, मरेपछि त्यही छोराले पिण्ड–पानी दिएपछि पितृमोक्ष हुन्छन् भन्ने भ्रम हामीले कहिलेसम्म पाल्ने ? जुन सन्तानले जिउँदो हुँदा घृणा गर्छ भने उसैले पिण्ड दिँदा मोक्ष पाउँछन् भन्ने के प्रमाण ? सिर्फ हामी विश्वासको आधारमा हाम्रो धर्म–संस्कृतिलाई डोर्‍याइरहेका छौं । लैङ्गिक भेदभाव गरिरहेका छौं । सनातन धर्मले शुभकार्य संस्कारहरूमा छोरा (पुरुष) को उपस्थितिलाई बढी प्राथमिकता दिएको भेटिन्छ । त्यसैले श्राद्ध गर्ने अधिकार छोरालाई दिएको हो । श्राद्ध पक्षको वैज्ञानिक आधार र ज्योतिषशास्त्रकै अनुसार मनुष्य मृत्युपश्चात् उसको शरीर पञ्चतत्त्वमा विलिन हुनपुग्छ भने आत्मा परमात्मामा लिन हुन्छ । यो नै सनातन धर्मको भारतीय दर्शन सिद्धान्त पनि हो । सनातन धर्मको दार्शनिक चिन्तन परम्परा प्राचीन छ, तर पनि हामीबीच एउटा प्रश्न भने आउँछ, मृत्युपछि मनुष्य कहाँ जान्छ ? यसको वैज्ञानिक आधार यही हो भन्न कसैले सकेको छैन । सबैले आ–आफ्नै तर्क पेस गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व ›